टिपर आतंकः मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु «
टिपर आतंकः मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु
प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७५, बुधबार १५:५२
काठमाडौं । भक्तपुरमा टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालकको मृत्यु भएको छ । भक्तपुरको जगतबाट सल्लाघारी आउदै गरेको बा. ४ ख ३६५० नम्बरको टिपरले बा. ८८ प ८५२ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । टिपरको ठक्करल काभ्रेपलाञ्चोक दराउने पोखरी–२ घर भएका रामकृष्ण श्रेष्ठ को मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
घाइते श्रेष्ठलाई उपचारको लागि भक्तपुर अस्पताल पठाइएको थियो । भक्तपुर अस्पतालले श्रेष्ठलाई सात बजे मृत घोषणा गरेको हो । ट्रिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि स्थानीयले टिपर तोडफोड गर्नुको साथै आगजनी पनि गरेका छन् । ट्रिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि स्थानीयले ट्रिपर तोडफोड गर्नुको साथै आगजनी पनि गरेका हुन् ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा बेलुका ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म टिपर चलाउने नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले रोक लाएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समेत केही टिपरलाई चल्न दिने निर्णय गरेका थिए ।